Andro: 3 Febroary 2019
TÜDEMSAŞ dia mampanantena fa ny Hope Çık dia tokony hiaro ny rafitra
TÜDEMSAŞ dia afaka manatanteraka ny asan'ny orinasa sinoa izay nomena ny maintsin'ny Metro. Hou Bo, Liu Huanjun ary Yang Lie ao amin'ny CRRC avy any Chine ary Liu Hao avy ao Zeer dia nitsidika TUDEMSAS. Tale jeneralin'ny TÜDEMSAŞ [More ...]
Uskudar Cekmekoy Line 20 km ny lavany, dia ny faharoa Metro-dalana, ny aziatika ny lafiny Torkia no voalohany driverless Metro andalana. Manomboka eo amin'ny kianja Üsküdar ny tsipika, mandalo ny foiben'ny distrikan'i Ümraniye ary mifarana amin'ny kianja Çekmeköy. [More ...]
Manamafy ny kalitao ao amin'ny metro ao Metro any Istanbul
Metro İstanbul A.Ş dia nandray andraikitra hanangana trano lahy sy vavy, efitrano fandroahana, trano fitaizana zaza ary trano fialan-tsasatra ho an'ny mpiasa ao amin'ny tobin'ny Metro Metro Istanbul A.Ş hampitomboana ny fahafaham-pon'ny mpandeha eny amin'ny gara lehilahy sy vehivavy Moske, trano fandroahana zaza [More ...]
Dinar no toeran'ny fiatoana amin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha
Afyonkarahisar, Kütahya, Eskisehir, Istanbul, Izmir dia miorina eo amin'ny sehatry ny fampianarana haingam-pandehan'ny lamasinina Dinar General Manager dia tonga tao amin'ny TCDD General Manager İsa Apaydın sy ny delegasiona miara-mitory ao Dinar, gara misy lozabe hafa ary roa [More ...]
Zava-mahatsiravina nateraky ny fiaramanidina 7 Maty tany India 29
Sarety sivy sivily amin'ny mpandeha lamasinina tao Bihar, India. Olona 7 no maty ary naratra ny olona 29. Famonoana fiaran-dalamby ao amin'ny fanjakana Bihar any atsinanan'i India [More ...]
Fihetsiketsehana mampatahotra ny fiampitana ny Level ao Tekirdag
ÇerkezköyNa dia mihidy aza ny sakana mankany amin'ny lembalemban'ny lamasinina dia nahatratra ny fiara izay nanamory. Tsy nisy loza nitranga noho ny fiheveran'ny mpamily. Ny lozam-pifamoivoizana izay mitondra ny fo mankany amin'ny vava, ny toeram-piantsonan'ny manodidina Çerkezköy County [More ...]
Fiaramanidina goavana ho any amin'ny seranam-piaramanidin'i Istanbul
Turkish Airlines dia mifindra amin'ny seranam-piaramanidina Ataturk mankany amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul. IZANY, fitaovana vitsivitsy sy fitaovana ary milina sasany omaly, niravina ny konohana 35 TIR. Hifarana amin'ny volana martsa 3 ny hetsika lehibe. Weather Weather [More ...]
Tetezana ny tsatoka vita amin'ny tsangambato vita amin'ny Gölcük Yüzbaşılar
Kocaeli Metropolitan Munisipaly dia manatanteraka tetikasa lehibe mba hampandeha tsara ny fihenan-doha ao an-tanàna. Ao anatin'izany sakana izany dia misy asa-tanana vaovao dia atao any amin'ny D-100 sy D-130 ary ny lalana dia fitaterana. Metropolitan miasa amin'ny D-130 [More ...]
Alarko hanao ny faritra atsimo amin'ny Bucharest Ring Road
Alsim Alarko Industrial Plants and Trade Inc. dia nahazo ny volavolan-dalàna ho an'ny fananganana ny tapany atsimon'ny lalana peratra Bucharest. Vidy lafo ho an'ny faritra 17 kilometatra làlan-kavoana tsy anisany VAT 830 tapitrisa 679 arivo 662 [More ...]
Androany amin'ny tantara: 3 Febroary 1941 Aydın Germencik ...
Androany tao amin'ny Tantara 3 Febroary 1941 12 no maty tamin'ny fianjeran'ny lamasinina teo akaikin'i Aydin Germencik